Toshiba DynaEdge, kumbuyuutar jeebka ku xiran oo ay weheliyaan muraayadaha casriga ah | War gadget
Toshiba DynaEdge, kumbuyuutar jeebka ku xiran oo ay weheliyaan muraayadaha casriga ah
Ruben gallardo | | Qalabka la gashan karo, Kumbuyuutarro
Toshiba wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid kamid ah hogaamiyaasha wax soo saarka kumbuyuutarka ee ganacsiga adduunka. Waxa ugu dambeeya ee uu ina tusayaa waa xirmada Toshiba DynaEdge, oo ka kooban kombuyuutar jeeb yar iyo muraayadaha casriga ah. Waxaas oo dhan, mar labaad, waxay diiradda saareen adduunka shaqada iyo si shaqaaluhu ay gacmahoodu xor u yihiin mar walba.
ka wearables Waxay u yimaadeen inay nolosha aad uga raaxaystaan. Waa suuq ay ku badan yihiin saacadaha casriga ah, laakiin in yar oo ka mid ah waxaan arki doonaa qalab dheeri ah oo lagu soo daray. Waxaanuna ka hadlaynaa, tusaale ahaan, muraayadaha indhaha. Toshiba waxay rabtaa adeegsiga qalabka noocan ah inuu ku faafo shirkadaha. Xalkan, Shirkada Jabbaan waxay dooneysaa inay shirkadaha ka dhigto kuwa wax soo saar badan shaqaaluhuna wax badan qaban karaan iyagoo gacmahoodu xor u yihiin inay shaqeeyaan.
Marka hore waxaan leenahay Toshiba dynaEdge DE-100. Kumbuyuutarkani macno ahaan waa jeeb-egyahay. Waxay qaadan laheyd booska casriga. Sidoo kale, PC-gaan yar wuxuu leeyahay jiilka lixaad ee Intel processor processor-ka uu ku shaqeynayona waa Windows 10. Dhinaca kale, PC-gaan gaarka ah wuxuu leeyahay badhanno kontorool jireed oo ku yaal shaashadiisa iyo batteriga laga saari karo oo hal lacag ku shubi kara. ismaamul ilaa 5,5 saacadood, sida ay sheegtay shirkadda.
Sida muraayadaha casriga ah, waxay ku saabsan tahay qaabka Toshiba AR 100 Daawade. Muraayadahaasi waxay leeyihiin Xiriirka WiFi, Bluetooth, oo lagu daray GPS waana la isticmaali karaa gacmo-la'aan. Toshiba AR100 Viewer wuxuu shaqaalaha u oggolaan doonaa inay ku xirmaan shabakadda shirkadaha, soo diraan oo helaan macluumaad, si toos ah u soo bandhigaan fiidiyoow toos ah, iyo inay la socdaan hantida. Iyo, taxaddar, maxaa yeelay ma aha oo kaliya inaad diri karto faylasha, laakiin sidoo kale ayaa kuu oggolaan doonta inaad fiidiyowyo u dirto waqtiga dhabta ah. Tani waxay noqon doontaa mid muhiim ah si loo badbaadiyo waqtiga marka la xallinayo dhibaatooyinka ama arrimaha.
Xirmada Toshiba dynaEdge waa la iibin doonaa Yurub laga bilaabo rubacii labaad ee sanadkan 2018. Waqtigan xaadirka ah wax qiimo ah lama soo bandhigin lamana oga in dynaEdge DE-100 lagu heli doono qaabab kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Toshiba DynaEdge, kumbuyuutar jeebka ku xiran oo ay weheliyaan muraayadaha casriga ah
Mophie Powerstation USB-C XXL waxaan ka qaadi karnaa ilaa MacBook Pro iyo sidoo kale aalado kale